အတ္တဘေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အတ္တဘေး
Posted by Foolish Girl on Aug 27, 2015 in My Dear Diary | 10 comments
Foolish Girl ခံစားမိသမျှ
ခုတလောရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အလှူငွေကောက်တာတွေကို ကလေး လူငယ် လူကြီး ဆင်းရဲချမ်းသာ အကုန်လုံးကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ လုပ်နေကြတာမြင်ရတော့ကြည်နူးမိတယ်။
သြော်လူတွေ တစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်တော့ကျန်တဲ့သူတွေကမရှိပေမယ့် ရှိသလောက်ကူညီရိုင်းပင်းကြတာလေးကလည်းကြည်နူးစရာပေါ့။
ရေဘေးအတွက် အလှူခံပါတယ်ဆိုပြီးရသမျှငွေကိုအလှူခံတဲ့သူတွေကအညီအမျှခွဲဝေကြတယ်၊ ရေဘေးအတွက် အလှူခံတဲ့အချိန်မှာ စားသောက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ရတဲ့ငွေကနေရှင်းတယ် (မရှင်းနဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘဲ ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအတွက်လှူထားတဲ့ငွေကို ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေမှာစားပြီးငွေရှင်းတာကိုပြောချင်တာပါ)၊ တချို့တချို့ကျပြန်တော့ နာမည်ကြီးချင်တာရယ် ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တာရယ်ပေါ့(fb မှာ status တင်ဖို့ စသဖြင့်ပေါ့) ၊ တချို့များကကျပြန်တော့ ပရိတ်သတ်တွေမုန်းမှာစိုးရိမ်တာပေါ့
ပြောရရင်တော့အများအတွက်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံတဲ့သူတွေရှိသလို ကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ် အဲဒီလိုလုပ်ကြတာကိုအပြစ်လို့မဆိုချင်ပေမယ့် အလှူငွေတွေကောက်ခံတဲ့နေရာက ငွေကြေးတွေကိုအလွဲသုံးစား လုပ်နေတာတွေကတော့ ဘုရားမရှိတရားမရှိမို့မကြောက်ကြတာလား???? ကျွန်မအနေနဲ့ ကိုယ့်အချိန်တွေကို လူမူကူညီရေးတွေအတွက်မပေးနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လှူတဲ့ငွေလေးကိုတော့ တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူဆီရောက်စေချင်တယ် ၊
ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံသဘာဝဘေးအန္တရယ်ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒုက္ခရောက်နေကြချိန်မှာ တချို့တချို့သောစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့ကြီးပွါးသထက်ကြီးပွါးအောင်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုကစားကြပြန်တယ် အိုးအိမ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုမှ စားစရာသောက်စရာတွေအတွက် ဈေးကြီးကြီးနဲ့ဝယ်နေရပြန်တယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေခမျာတစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် ဖြစ်ရတယ်။
ရေဘေးဆိုတာထက် အတ္တဘေးက ပိုပြီးဒုက္ခကြီးတာမသိကြလေရော့သလားနော်?????????????????????????????????
သဘာဝဘေးရဲ့နောက်က ဘေး ပေါ့နော်။
.တကယ်တိတိကျကျသိခဲ့ရင်ဖေါ်ထုတ်ပေးပြီး အရေးယူသင့်တယ်
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စကားပုံက အလကားပေါ်လာတာမှ မဟုတ်တာ
ရပ်ကွက်ထဲက ကုန်စုံဆိုင်လေးတွေမှာ…ဟင်းခပ်ဆား – အရင်က တစ်ရာတန်အထုပ်ဟာ
အခု ၂၀၀ ဖြစ်သွားပါပြီ။
မတရား လောဘကြီးချင်နေတဲ့ တချို့ စီးပွါးရေးသမားတွေဟာ….
လူတွေ မျက်ဖြူဆိုက်တာကို ကြိုက်တဲ့ ဆေးသမားအကျင့်ပုပ်တွေလိုပဲ..
ဒီLink မှာပါတဲ့ ဟန်ဆိုတဲ့ ကားတိုလေးက တော်တော်ကောင်းတယ်
တဖြေးဖြေး လူတွေက လူစိတ်ပျောက်သွားကြတယ်။
ဟန်ချက်တစ်ခုပျက်သွားရင် အဲဒါကို ပြန်ထိန်းရင် ကျန်တဲ့ဟန်ချက်တွေလဲ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို လွဲကုန်ကြရတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပရဟိတကို လုပ်ကြပြီဆိုပေမယ့် အတ္တဟိတကို မလွှတ်နိုင်ကြသေးသူတွေလည်း ပါလာမှာပါပဲ။
ကိုယ့်အလှူ အကျိုးရှိအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရတာကို ရွေးလှူပေ့ါ။
စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ ကုန်ပစ္စည်းရှားပါးမှု အဲဒါတွေပေါ်လိုက်ပြီး ရေမြင့်ကြာမြင့်ဆို ကုန်ဈေးနှုံးတက်ရောင်းရတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
အလှူပေးတဲ့အခါ အလကားပေးနိုင်ပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ စီးပွားရေးအရပဲ တွက်ရပါတယ်။
Donation is Donation ပါ မရောပါဘူး
စီးပွါးရေးလုပ်သူတိုင်းကိုလည်းမဆိုလိုပါဘူး အမြတ်ကြီးစားတဲ့ စီးပွါးရေးသမားတွေကိုပြောချင်တာပါ
ထစ်ခနဲအသံကြားတာနဲ့ (အစိုးရလစာ၊ ၀န်ထမ်းလစာ၊ အခြေခံလစာ စတာတွေတိုးတာ၊ ရေကြီးတာ အစရှိသဖြင့်ပေါ့) လှောင်ထားတဲ့ကုန်တွေကိုမထုတ်ဘဲ
ပစ္စည်း ပြတ်တော့မှ ဈေးမြင့်ပြီးထုတ်ရောင်းတာ
ဥပမာ 200 နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ stock က ကိုယ့် warehouse ထဲမှာလည်းကုန်သွားလို့
ထပ်ဝယ်တဲ့အခါ 400 ဖြစ်သွားလို့ရောင်းတဲ့အခါ 500 နဲ့ရောင်းတာဖြစ်သင့်ပါတယ်
200 နဲ့ဝယ်ခဲ့တာကို လက်ရှိပေါက်ဈေး 500 နဲ့ရောင်းတာမျိုးကျတော့တမျိုးပဲပေါ့ အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာသိရက်နဲ့ ကိုယ့်တ၀မ်းထဲပဲကြည့်တယ်
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ ပျောက်ကုန်ကြတယ်.. သင့် မသင့် . အကောင်းအဆိုး ခွဲခြားနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်တွေ သေဆုံးကုန်ကြတယ်… ကိုယ့်တစ်ဝမ်းအတွက် သားကိုချနင်းသူတွေ များလာတယ်.. စနစ်ကြောင့် အရာအားလုံး ပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်…